पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका यस्ता छन् अडचनहरू? कसरी सञ्चालन होला? – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका यस्ता छन् अडचनहरू? कसरी सञ्चालन होला?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका यस्ता छन् अडचनहरू? कसरी सञ्चालन होला?
admin November 25, 2021 Uncategorized 0
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अहिलेसम्म ८७ प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनंकर्मीका अनुसार आउँदो चैतमा निर्माण कार्य सकेर बुझाउने गरी धमाधम काम भइरहेको छ।
निर्धारित समयसीमा २०७८ सालको चैतभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा नेपाली नयाँ वर्षको शुरूमै विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ। विमानस्थल निर्माण पूरा भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन र पूर्वाधारको काम समयमै नहुँदा लगत्तै जहाज उड्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन प्रमुख अवरोधको रूपमा रिठ्ठेपानी डाँडा देखिएको छ। आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार विमानस्थलदेखि तीन किलोमिटरभित्रै रहेको ल्यान्डफिल साइटको विकल्प नखोजिनु, नेपाल आयल नियममको डिपो स्थापनाको काम नहुनु र विमानस्थलतर्फ सोझिएका पोखरा बजार हुँदै बग्ने ढल तथा सिँचाइको नहर व्यवस्थापन नहुनु विमानस्थल सञ्चालनमा प्रमुख अड्चनका रूपमा रहेका छन्।
पोखरा: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले सञ्चालनमा आउँछ?
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने खुसीसँगै प्याराग्लाइडिङ रोकिने चिन्ता बढिरहेको अवस्था छ । सो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुटका लागि भारतसँग प्राविधिक र कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट कुरा भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एअर ट्राफिक व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुवर्णराज उपाध्यायले बताए।
सिमरा हुँदै आउन केही टाढा पर्ने भएकोले महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै छोटो रुटबाट पनि विमानस्थलमा आउने र जाने वातावरणका लागि पनि हालै विभागीय मन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बेलामा समकक्षीसँग कुरा भएको उपाध्यायले जनाए। यद्यपि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको समयसम्म हवाई रुटको समस्या नरहने उनको दाबी छ।
समस्याबारे गत असोज २५ गते विमानस्थल निरीक्षण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालै निरीक्षणमा पुगेका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई समेतलाई अवगत गराइएको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उच्च तहबाट आश्वासन मात्रै
प्रधानमन्त्री देउवाले अड्चन हटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। तर समस्याको गाँठो भने अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। विदेशी विमानहरू उडान र अवतरण गर्ने क्रममा जोखिम मानिएको रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनमै काम अड्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्। यो डाँडा ४० मिटरसम्म कटान गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सरकारी वनतर्फका रूख समेत कटान शुरू भएको छैन। निजीतर्फको डाँडा भने कटान भइरहेको छ । आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम भने शुरू भएको छ।
रूख कटानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी वन कटान आदेश दिनुपर्छ। वन विभागबाट वन कटानको स्वीकृती पत्र आएपछि डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई कटान गर्न आदेश दिनेछ। वन विभागले सोझै आदेश पनि दिन सक्छ। अहिले पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम शुरू भएको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शालिकराम पराजुलीले बताए।
सरकारी वन क्षेत्रका रूख काट्दा आयोजनाले वन विभागका नाममा जति डाँडा पर्छ त्यसको सट्टाभर्ना दिनुपर्छ। सट्टाभर्ना दिएको जमिनमा पाँच वर्षसम्म बिरुवा हुर्काएर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारी वन क्षेत्रमा साल, चिलाउने, कटुस, रावपार्ट लगायतका सानाठूला ६ सय रूखको जङ्गल रहेको डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बरालले बताए।
स्थानीयवासीको विरोध किन?
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक पर्ने ल्यान्डफिल साइट अहिलेसम्म नयाँ ठाउँमा सार्ने काम शुरू हुन सकेको छैन। हालै पोखरा महानगरपालिकाले नयाँ ल्यान्डफिल साइटका लागि आवश्यक जमिन पोखरा वडा नं १६ र २० को बीचमा पर्ने पस्मराङलाई छनौट गरी सार्ने निर्णय गरेलगत्तै स्थानीयवासीले त्यसको विरोध शुरू गरेका छन्।
पस्मराङ क्षेत्र खानेपानीको मुहान भएकोले त्यहाँ ल्यान्डफिल साइट सार्नु घातक हुने स्थानीयवी बासिन्दाको तर्क छ। ल्यान्डफिल साइटका कारण पानीको मुहान दूषित हुने भन्दै वडाध्यक्ष सिम गुरुङले पनि आन्दोलनमा स्थानीयवासीलाई साथ दिएका छन्। विश्वमै दुर्लभ प्रजातिका डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो लगायतका गिद्धले अहिले पनि ल्यान्डफिल साइटनजिकैको निर्मलपोखरीको जङ्गलमा गुँड लगाउने गरेको पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे बताउँछन्।
चराचुरुङ्गीलाई अन्यत्र जाने वातावरण बनाउन ६ महिनापहिला नै ल्यान्डफिल साइट सार्नुपर्ने चरामा विद्यावारिधी गरेका डा. हेमसागर बराल बताउँछन्। पोखरा विश्वमै दुर्लभ मानिएका गिद्ध, महाचिलहरूको उपयुक्त वासस्थान रहेको पनि उनी बताउँछन्।
नेपालमा पाइने सबै नौ प्रजातिका गिद्ध पोखरामा पाइने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि तीन किलोमिटर क्षेत्रभित्रै सेतो गिद्ध, डङ्गर गिद्ध लगायतका वासस्थान रहेकोले बेलैमा ल्यान्डफिल साइट सार्ने, गिद्धका लागि सञ्चालनमा रहेको कास्कीको माछापुच्छे गाउँपलिका घाचोकस्थित जटायु रेष्टुराँमा गिद्धका लागि सिनोको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्न सकिए हवाई उडानमा अवरोध रोक्न सकिने चराविद्‌ बराल बताउँछन्।
पोखरा बजारको ढल तथ सिँचाइ नहरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वतर्फको डिल कटान हुँदै गएको छ। कटान हुने क्रम नरोकिए विमानस्थललाई पनि असर पर्ने आयोजनाले औँल्याएको छ। गत वर्षायाममा आएको भलपानी र सिँचाइको नहरको पानीका कारण विमानस्थलनजिकको डिल कटान भएको छ।
एक स्थानीयवासी हेमन्त ढकालका अनुसार आयोजनाले बनाएको नहर पटकपटक भत्कँदा स्थानीय किसानका घर, बारी र कुखुराका खोर पनि डुबानमा परेका थिए। अर्कोतर्फ नेपाल आयल निगमको डिपो स्थापनाको काम पनि हुन सकेको छैन। यी सबै समस्याबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सबैलाई बताउँदै आए पनि समाधान भने अहिलेसम्म फुक्न नसकेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रोतः सेतोपाटीका लागि कृष्णमणि बराल, पोखराबाट ।
एमाले महाधिवेशनकाे पूर्वसन्ध्यामा चितवनमा बढ्यो यस्तो चहलपहल!
आज पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान प्रभावित
दुखद खबर : हार्दिक श्रदान्जली , प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अस्पतालमा निधन, दुखद खबर हार्दिक श्रदान्जली भन्दै सामाजिक संजालमा झुटा पोस्ट नलेख्न आग्रह
केटाहरू विवाहित महिलाप्रति आकर्षित हुने ५ कारण !
नेपालमा पनि पब्जी र फ्री फायर बन्द हुने गरिने सम्भावना!